कसैले मलाई मेरो बाल्यकालबारे आत्मकथाजस्तो केही लेख्‍न भनेको थियो । मन नलागी-नलागी केही लेख्‍न थालें । तर आफ्नै बारे लेख्दा पिताजीका बारेमा पनि केही त लेख्‍नै पर्‍यो, लेखेर सिद्धयाएँ पनि । तर आमाको बारेमा लेख्‍ने केही कुरै मनमा सुझेन । लेख्‍ने कुरा नै के थियो र जस्तो लाग्यो त्यतिखेर । लेखेको भए शायद एक वाक्य मात्र लेख्‍न सकिन्थ्यो - ‘मेरी आमा एउटी गौ प्राणी हुनुहुन्थ्यो’ । मजस्तै अरूहरू धेरैले आफ्नी आमाबारे त्यसै भन्लान् ।
मेरी आमाको स्वर्गवास भयो - तर कोभिड-१९ का कारणले होइन । वहाँ ९६ वर्ष हुनुभएको थियो । वहाँलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह पनि थिएन । वहाँमा कुनै रोग पनि थिएन । वहाँको मुटु चल्न छोड्यो र विना कुनै पीडा जानुभयो । मुटुले ९६ वर्षसम्म इमानदारीसाथ काम गरिरहेकै थियो तर वृद्ध मुटु थाक्यो र सदाका लागि विश्राम लियो । त्यत्ति हो । वहाँ आठ भाइ छोरा र दुई छोरीकी आमा हुनुहुन्थ्यो । शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो । कहिले-काहिँ तीज र पञ्चमी लगातार पर्दा ४८-५० घण्टासम्म पनि निर्जल उपवास गर्नुहुन्थ्यो । आमा ४२ वर्षकी हुँदा मेरो कान्छो भाइ साउन महिनामा जन्मेको थियो । त्यही वर्ष भदौमा चौथी टुटेर तीज-पञ्चमी लगातार पर्न गयो । आमा एक महिनाकी सुत्केरी । तैपनि ४८ घण्टा निर्जल उपवास गर्नुभयो । अनि ऋषि पञ्चमीको पूजा गरेर मात्र मुखमा पानी हाल्नुभयो । त्यस्ती आमाबाट कति दूध आयो होला र मेरो कान्छो भाइले कति दूध पायो होला ? तर केही पाएछ र त बाँच्यो ।
मेरी आमा २०६८ साल फागुनमा स्वर्गवासी हुनुसित कोभिड-१९ को कुनै सम्बन्ध थिएन । तर अहिले संसारभर यसको महामारी चलेको बेला वहाँलाई सम्झनुपर्ने कारण छ - त्यो हो वहाँको चरित्र भनौं या आनिबानी । चोखोनितो र सफासुग्घर रहने वहाँको बानीलाई मानिसहरू ‘अति’ भन्थे । जस्तो वहाँ आफ्नो घरदेखि पँधेरो (पानीको कुवा) सम्मको ढुङ्गाले चिनेको बाटो कुनै कारणवश अशुद्ध लाग्यो भने सफा गरेर पानीले पखाल्न समेत लगाउनुहुन्थ्यो र पखालिदिनेलाई एक पाथी धान दिनुहुन्थ्यो । मजदूरी गरेर जीविका गर्नुपर्ने गाउँकी कुनै गरीब महिलाले त्यो काम वहाँको लागि एकै छिनमा गरिदिन्थी र एक पाथी धान पाउँथी । ऊ खुशी हुन्थी र मेरी आमा पनि खुशी । त्यो देखेर छिमेकीहरू हाँस्थे । मेरी आमाको त्यस्तो ‘अति’ व्यवहारलाई अंग्रेजीमा ‘क्रेजी’ भन्छन् जस्तो लाग्छ - सकारात्मक अर्थमा ।
मलाई पनि लाग्थ्यो - मेरी आमा सफाइको कुरामा ‘अति’ नै हुनुहुन्थ्यो । वहाँले फोहोरी ठानेको कुनै पुरुष वा महिला आई हाम्रो घरको आँगन छेउको पर्खालमा बसेर गएपछि ऊ बसेको छपनी ढुङ्गो पनि वहाँ पखाल्न लगाउनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी वहाँलाई सफा नलाग्नेहरूले छोएको आँगनको तगारो वा कुनै ठाउँ पनि पखाल्न लगाउनुहुन्थ्यो । त्यो ठाउँमा हामीले छोएमा हाम्रो हात पनि धुन लगाउनुहुन्थ्यो । दिउँसो घरबारीमा काम गर्न आएका पुरुष-महिलाले प्रयोग गरेका हँसिया, डोका, नाम्ला, कुटा, कोदाला साँझ धुन- पखाल्न लगाउनुहुन्थ्यो । यी सबै कुरा हाम्रा पिताजीलाई थाहा थियो । त्यसैले २०१७ सालमा आफ्नो घरदेखि तीन दिनको पैदल दूरीमा रहेको पाल्पामा सरकारी सेवामा रहँदा वहाँले तनहुँमा रहेको मलाई एउटा चिठीमा यस्तो लेख्‍नुभएको थियो -
स्वस्ति श्रीजयराज बाबु सुतमा मेरा शुभाशीष छन्
तीमीहेरु निरामयै रहिदिए सन्तुष्ट हुन्थ्यो त मन् ।
सन्चो छू म त देहमा त, मनमा टाढा भयाँ यै पिर
मात्रै हो, अब चेञ्जमा त परुला पक्का पनी घर् तिर ।।
कोदाला, हँसिया पखालि घरका डोका र नाम्ला धुँदा ।
धूनू-लिप्नु, पछार्नु ती वधु कुनै यै काम् सदा-सर्वदा ।।
आमाको छ स्वभाव यै कसरि हो खानेकुरा आर्जनू ?
‘आयस्ता हुनि काम् लगाउनुहवस्’ - यो बात भन्दैर’नू ।।
मेरा पिताजी नरनाथ आचार्य आफ्ना चिट्ठीपत्रहरू संस्कृत र नेपाली कवितामा लेख्‍नुहुन्थ्यो । वहाँका त्यस्ता केही चिट्ठीहरू पुस्तकाकारमा छापिएका छन् (२०४० सालमा) ।
मेरा विवाहित दाजुहरू पढाइका लागि काठमाडौंमा हुनुहुन्थ्यो । भाउजुहरू घरमा आमाका सहयोगीका रूपमा हुनुहुन्थ्यो । तर आमाले भाउजुहरूलाई लगाउने काम भने पिताजीले चिट्ठीमा लेखेजस्तै खालको हुन्थ्यो धेरैजसो ।
अहिले संसारभर यसको महामारी चलेको बेला वहाँलाई सम्झनुपर्ने कारण छ - त्यो हो वहाँको चरित्र भनौं या आनिबानी । चोखोनितो र सफासुग्घर रहने वहाँको बानीलाई मानिसहरू ‘अति’ भन्थे । जस्तो वहाँ आफ्नो घरदेखि पँधेरो (पानीको कुवा) सम्मको ढुङ्गाले चिनेको बाटो कुनै कारणवश अशुद्ध लाग्यो भने सफा गरेर पानीले पखाल्न समेत लगाउनुहुन्थ्यो र पखालिदिनेलाई एक पाथी धान दिनुहुन्थ्यो । मजदूरी गरेर जीविका गर्नुपर्ने गाउँकी कुनै गरीब महिलाले त्यो काम वहाँको लागि एकै छिनमा गरिदिन्थी र एक पाथी धान पाउँथी । ऊ खुशी हुन्थी र मेरी आमा पनि खुशी ।
अहिले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी आतङ्क चलिरहँदा मेरी आमाको त्यस्तो व्यवहार सम्झियो जसलाई मानिसहरू ‘अति’ भन्थे । बहिरबाट घर आइपुगेपछि वहाँले हामीहरू कसैलाई पनि हात-गोडा नधोई घरभित्र पस्न दिनुहुन्थेन । घरको ढोकाअगाडि ठूलो ढुङ्गो थियो । त्यसमा उभिएर पर्खिनुपर्थ्यो र आमाले भित्रबाट आफैं ल्याएको वा कसैलाई पठाएको ठूलो लोटाको पानीले हात-गोडा धुनैपर्थ्यो । हातबाट सङ्लो पानी नआइञ्जेल हात धुन लगाउनुहुन्थ्यो । पहाड गाउँघरमा साबुन उति प्रयोग हुन्थेन । सादा पानीले मात्र धुँदा हात कति सफा हुन्थ्यो, त्यो त थाहा भएन । तर आमा जे गरे पनि हात धुन भन्नुहुन्थ्यो । “हात धोएर लुगा सुकाऊ, हात धोएर लुगा उठाऊ” । ‘अति’ भएर नै होला, मेरा जेठा दाज्यू स्व. भोजराजजीले आमालाई जिस्क्याउँदै भन्नुहुन्थ्यो - “लप्सी पाक्यो - हात धुने; काफल पाक्यो - हात धुने; सार्की आयो- हात धुने; कामी आयो- हात धुने” । तर हात-गोडा धुने आमाको त्यो कडा नियम राम्रै रहेछ- अहिले पो थाहा भयो ।
मलाई सम्झना छ - मेरा पिताजी घरमा हुँदा आमाले साँझको खाना खानुअघि वहाँका गोडा तातोपानीले घरैभित्र कोपरामा धुनुहुन्थ्यो । हामी साना-साना केटाकेटीहरूको पनि सबैको गोडा धोइन्थ्यो । आमाले नभ्याए ठूली भाउजूहरूले । आमाले पिताजीको गोडा मात्र धुनुहुन्थेन, धोएपछि ढोग्नुपनि हुन्थ्यो । अनि तीन-चार वर्षको मेरो कान्छो भाइले गोडा धोएपछि एक पटक ‘मलाई पनि ढोग’ भनेको थियो । त्यो सुनेर हामी सबै हाँसेका थियौं ।
मलाई यो पनि सम्झना छ- आमा नोटहरू पनि धुनुहुन्थ्यो । २०१८ साल वैशाख-जेठतिरको कुरा हो यो । त्यसताका लमजुङतिरबाट धान बेसाहा गर्न थैला लिएर गुरुङहरू हाम्रो गाउँमा आउँथे । शायद तिनीहरू भारतीय वा ब्रिटिश सेनामा काम गरेका परिवारका केही पुरुष र महिलाहरू हुन्थे । तिनीहरूको शरीर स्वस्थ र लवाइ रामो हुन्थ्यो । युवतीहरूको घाँटीमा सुनका ठूलाठूला नौगडी हुन्थे - सुन्दर शरीरमा मखमली ब्लाउज र राम्रा लुगामा तिनीहरू निकै आकर्षक देखिन्थे । त्यसैले म मनमनै प्रश्न गर्थें - किन तिनीहरूको घरमा हाम्रो घरमा जस्तो धान हुँदैन ? तर पछि मैले बुझें - लमजुङमा धेरै धान उत्पादन हुँदैनथ्यो । पैसा भने देशबाहिरबाट आउँथ्यो । त्यही पैसाले धान किन्न मानिसहरू हामीकहाँ आउँथे । पिताजी दिनमा काममा गएको बेला आमाले उनीहरूलाई धान दिनुहुन्थ्यो र आएको पैसा आफैंसित राख्‍नुहुन्थ्यो । त्यो पैसा आफूसित राखेर पनि आमाले के नै गर्नुहुन्थ्यो र ? गाउँमा पैसा खर्च गर्ने कुनै काम नै हुँदैनथ्यो । तर आफ्नो साथमा केही पैसा राख्न पाउँदा वहाँलाई खुशी लाग्थ्यो शायद ।
धान किन्न आएका युवा-युवतीहरूले दिएका नोट राख्‍नुअघि आमा तिनलाई साबुनले पखालेर थालमा राखी पर्खालमाथि घाममा सुकाउनुहुन्थ्यो । हावाले उडाउँथ्यो । मैले गएर ल्याउनुपर्थ्यो । मलाई सम्झना छ - कुनैमा हिमालय शमशेर, कुनैमा लक्ष्मीनाथ गौतम गभर्नर भनेर र राजा महेन्द्रको अनुहार छापिएका राता-राता दश–पाँच र एक रूपियाँका ती नोटहरू नयाँ र सफा हुन्थे । तैपनि आमा तिनलाई धुनुहुन्थ्यो । मैले सोधेँ - किन यो अनावश्यक झन्झट गर्नुभएको ? आमा भन्नुहुन्थ्यो - “धुनुपर्छ किनकि उनीहरूले नोट गन्दा थुक लगाएका पनि हुन्छन् । अनि ती महिलाहरू त पर सरेका पनि हुन सक्छन् । उनीहरू पर सर्दा हामीहरूले जस्तो बार्दैनन् । थाहा हुन्न । त्यसकारण तिनीहरूले दिएका नोट पखाल्नुपर्छ र सुकेपछि मात्र राख्‍नुपर्छ” । अहिले कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व-स्वास्थ्य संगठनले दिएका सल्लाह सुन्दा मैले मेरी आमाले भनेका ती कुरा सम्झिन थालेँ । थुकबाट, हातबाट संक्रमण हुन्छ रे ।
अहिले मेरो कान्छो छोरो (वहाँको नाति) डाक्टर छ - संवेदनशील छ । ऊ त्यही गर्छ जो मेरी आमा (उसकी हजुरआमा) गर्नुहुन्थ्यो । घरको फोन, मोबाइल फोन र हरेक उपकरणलाई स्यानिटाइजरले पुछ्ने - स्प्रेयरले शुद्धीकरण गर्ने । कोभिड-१९ को प्रकोपको समयमा वहाँको डाक्टर नातिले गरेको व्यवहार बुझ्न सकिन्छ ।
मलाई यो पनि सम्झना छ - आमा हामीलाई भेट्न काठमाडौं आउनुहुन्थ्यो । तर काठमाडौंको फोहोर वहाँलाई मन पर्दैनथ्यो । हाम्रो घरमा आएर भित्र पस्दा-निस्कँदा पनि आफूले हातमा लिएको सेतो टालोले ढोकाको ह्याण्डल समातेर उघार्ने-बन्द गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । हामीलाई त्यो देखेर मजा त लाग्दैनथ्यो तर वहाँको पुरानो बानी सम्झेर र आमाको काम हुनाले हामी त्यो सहन्थ्यौं । अहिले मेरो कान्छो छोरो (वहाँको नाति) डाक्टर छ - संवेदनशील छ । ऊ त्यही गर्छ जो मेरी आमा (उसकी हजुरआमा) गर्नुहुन्थ्यो । घरको फोन, मोबाइल फोन र हरेक उपकरणलाई स्यानिटाइजरले पुछ्ने - स्प्रेयरले शुद्धीकरण गर्ने । कोभिड-१९ को प्रकोपको समयमा वहाँको डाक्टर नातिले गरेको व्यवहार बुझ्न सकिन्छ ।
भनिन्छ - “पुरुष शिक्षित भए ऊ मात्र शिक्षित हुन्छ, नारी शिक्षित भए परिवारै शिक्षित हुन्छ” । मेरी आमा धेरै शिक्षित त हुनुहुन्थेन तर भानुभक्त आचार्य, लेखनाथ पौड्याल र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरू पढ्नुहुन्थ्यो । भानुभक्तीय रामायण त वहाँको सबैभन्दा प्रिय ग्रन्थ - धेरैजसो कण्ठस्थ भइसकेको थियो । अनि यो पनि भनिन्छ - नारीका तीन सौन्दर्य हुन्छन् - शारीरिक सौन्दर्य, विद्याको सौन्दर्य र चारित्रिक सौन्दर्य । मलाई लाग्छ मेरी आमामा तेस्रो सौन्दर्य मात्र थियो । त्यसैले वहाँले हामीलाई अक्षरको भन्दा चरित्रको शिक्षा दिनुभयो ।
आफ्नो बुढेसकालमा आमाले बागमतीको प्रदूषण देखेर भन्नुभयो - “यस्तो फोहोर नदीमा मलाई फाल्ने होइन, मलाई शुद्ध नारायणी नदीमा सेलाउनू । म यहाँ बस्दिन, चितवनमा बस्छु र देवघाटजस्तो पवित्र तीर्थमा मर्न चाहन्छु” । त्यसै गर्नुभयो पनि । वहाँको नाम गङ्गा थियो - गङ्गा नदीको पवित्रताको प्रतीकजस्तो । अहिले आएको कोभिड-१९ को प्रकोपको बेला भन्न मनलाग्यो - गङ्गाजी, तपाईंले जीवनमा हामीलाई पढाउन खोजेका अलिखित पाठहरू त राम्रा पो रहेछन् ।